यमुनापारीका प्राणीको नेपाल आगमन « Nepal Bahas
यमुनापारीका प्राणीको नेपाल आगमन
लघु व्यंग्य कथा
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७६, मंगलवार २१:१३
यमुनापारीबाट चैत १९ गते कृष्णवर्णका एक हुल प्राणी नेपाल जाने भनी हिँडेको खबर आयो । उनीहरूको गन्तब्य नेपालको काठमाडौं नै थियो ।
खबर पाउनासाथ सरकार मात्र होइन प्रतिपक्षी सबै दलहरूबीच कान ठाडा पार्दै आपसमा सोधखोज चल्न थाल्यो । साँच्चै भनौं, युद्धस्तरीय खैलाबैला मच्चियो । सत्ताधारी र प्रतिपक्षले परस्परमा कौतुहलताका साथ गरेको सोधखोज र मोबाईल फोनको व्यस्ततामै त्यो दिन बित्यो ।
शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल हस्याङ्फस्याङ् गर्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटका खास मन्त्रीहरू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत पार्टीका मूर्धन्य नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजीलाई आफ्नै निवासमा बोलाए ।
कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, विजय गच्छदार, डा. शशांक कोइराला, पूर्ण खड्का, अर्जुननरसिंह के.सी., रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल पनि प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाइए ।
प्रधानमन्त्रीले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई कडा निर्देशन दिए, “स्वागतको तयारीका लागि विमानस्थल र एयरपोर्टदेखि बस्ने होटलसम्म बाटोमा आजैदेखि विशेष सरसफाई र अन्य बन्दोबस्त मिलाउनु । रौँफरक कमजोरी गल्ती नहोस् ! सवारी नफर्केसम्म तयारी जारी राख्नु ! मैले तपाईलाई दोहो¥याएर इन्स्ट्रक्सन दिइराख्नु नपरोस् ।”
यसका लागि आवश्यक रकम तुरुन्त निकासा गर्न अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यस्तै जरुरी निर्देशन भयो र
कांग्रेस नेताहरूले आफूहरूलाई यहाँ बोलाउनपर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई सोधे ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वाभाविक शैलीमा भन्न थाले, “दक्षिणले विभिन्न समयमा अनेक पात्र पठाउँछ । कहिले जोगी पठाउँछ, कहिले नेता पठाउँछ, कहिले विद्वान पठाउँछ, कहिले छौँडा (जासुुस) पठाउँछ । हुल नै आउने भएपछि हुल बाँँधेर त्यसै आउँदैनन् । फेरि उताका प्रधानमन्त्रीको काम गराई अभियानको शैलीमा हुने गर्छ, भनेपछि योपनि कुनै न कुनै अभियान नै हुनसक्छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना अभूतपूर्व रुपले बढेर गएकोमा यमुनापारी चिन्ताको पारो पनि त्यति नै बढेको होला…..।”
कांग्रेस सभापति देउबा, जसलाई कम्युनिस्टहरू ‘होस्ल्याङे’ भन्ने गर्छन्, ओलीको कुरा नसकिँदै आफ्नो मौलिक शैलीमा दुवै पाखुरा मच्चाएर प्रतिवाद गर्नथाले, “के हेरेर बोल्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री जी तपाई ? कहाँ छ नेपालमा भारतविरोधी भावना ? यहाँ नयाँ हिन्दी सिनेमा आउनेबित्तिकै मेरो वाईफ भन्देखुन्लाई म र छोरालाई घरमै छोडेर फिलिम हलमा पुगिहाल्छिन्, कहाँ छ भारतविरोधी भावना ? नच्चाईने कुरा गर्नुहुन्छ ! काँ छ भारतविरोधी भावना ?”
ओली पनि सवालजवाफमा के कम ? भन्न थाले, “यो तपाईले बुझ्न नपा’को कि बुझ पचाको ? बुझ्न नपाको हो भने अब पनि तपाईले केही बुझ्नुहुन्न, बुझ पचाको हो भने म आफ्नो मुख किन दुखाउँ ? लौ यतिचाहिँ सुनिराख्नु होस्, भारतले चाकरी गर्नेलाई दास बनाउँछ चाकरी नगर्नेलाई लाश बनाउँछ ।”
“ल ल सबै कुरा तपाई नै बुझ्नुहोस्, विद्वान बन्नुहोस् ।” बुद्धिको कुरा आउनेबित्तिकै स्वभावगत रुपमा चिढ्चिढाहट रवैया देखाइहाल्ने देउवा भन्दैगए, “कुर्सीमा बसेर जापानमा हाम्री राजदूतलाई आजसम्म चलाईदिनु भएन, त्योबाहेक तपाईले एउटा पनि राम्रो काम के गर्नुभा छ ? यो स्वागतको काम चैँ राम्रो गर्नुहोस् ।”
“अनि वाईडबडीमा तपाईलाई जोगाएको चैँ राम्रो काम भएन ?…..” ओली पनि के कम् ?
“मलाई जोगा’को हो ? तपाई आफैँ जोगिया होइन ! मलाई जोगाईदिया रे !” देउवाको रगत उम्लिहाल्छ ।
के.पी. ओली भुत्भुताउन थाले, तर के भनेको उपस्थित सबैले बुझेनन् । लीलामणि पोखरेलले रिले गरिदिए, “लौ प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा सुन्नुहोस्, कालापानीमा इन्डियन आर्मीले कट्टु निचोरेको पानी खा’का यी महाकाली किनारका राजनीतिक मनुवाहरूलाई कुरा बुझाउन खोज्नु बेकार छ………हा ! हा ! हा !”
रामचन्द्र पौडेलको आफ्नै डम्फु बजाई छ र जहाँ पनि आफ्नै मात्र चिन्ता छ, “उताको यो आगमनलाई स्वागत गर्नमा प्रतिपक्षी दललाई स्वागत समितिको अध्यक्षता गर्ने मौका दिनुभयो भने सत्ता र प्रतिपक्षको समझदारी देखिन्छ र तपाईको सरकारको आयु पनि दिगो हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलभित्रको पनि प्रतिपक्षलाई जिम्मा दिइयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ ।”
यसबेला देउवा तात्तिने पालो रामचन्द्रको कुराले भयो, “बड्ता ख्याँख्याँ नगर्नुहोस् । तपाईको चिन्तनलाई थन्क्याउने काम म गर्दिम्ला ! भन्देखुन्लाई स्वागत समितिको अध्यक्षता प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने तपाईको प्रस्ताव ठीक हो । तर प्रतिपक्षभित्रको पनि प्रतिपक्ष रे ! कहाँ छ त्यो ? खोई म त मेरो प्रतिपक्ष कसैलाई देख्दिन…..कुरा गर्नुहुन्छ !….मै त हुँ निऽऽ ! इन्डियालाई तह लगाउन कसैले सक्छ भने मै सक्छु, तपाई (ओली) ले पनि सक्नुहुन्न, यहाँ भएका कसैले सक्दैन । ….आखिर मै त हुँ निऽऽ !”
“होइन यो के तमाशा हो !” अर्जुननरसिंह कराउन थाले, “उताबाट कुन हैसियतको को आउने हो त्यो थाहा छैन । केको लागि आउने, कसरी आउने, कतिजना आउने, कति समयको लागि आउने इन्तु चिन्तु केही थाहा छैन । आउने नै हो कि हावादारी कुरा हो त्यो पनि थाहा छैन । कुन स्तरको स्वागत गर्नुपर्ने हो त्यसको पनि यकिन छैन । दिल्ली भजाएर र दिल्लीका नाममा ब्लाकमेल गरेर गुजारा गर्नेहरू निश्चित रुपमा यहाँ धेरै देखिन्छन् । त्यहाँको आधिकारिक तहलाई एक वचन सोधेको पनि होइन । यहाँ भने सारा काम छोडेर सर्वदलीय इमर्जेन्सी बैठक नै हुनथाल्यो……।”
ओली जवाफ फर्काउँछन्, “दिल्ली बुझेको मान्छे भनेर बोलाको ! बुझ्नु भएछ दिल्ली ! एस्तै कुरा गर्नुस् ! उताबाट एक हुल नै आउने भनेर हिँडिसक्यो । आजै खबर आएको लौ सुन्नुस्, ‘यमुनापार से वागमती किनार’ भन्ने अभियानजस्तो कुरा छ ।”
हटलाईनमा यमुनापारी सोध्ने प्रयास भयो । उताबाट आधिकारिक तहबाट खबर आयो, “नो नो नो ! हामी यतिबेला अन्दरुनी व्यस्ततामा छौं । अहिले काठमाण्डूको दौरा गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन ।”
तैपनि यताका नेताहरूलाई पत्यार भएन । माधव नेपालले मुख खोले, “इन्डियाले हाम्रो बारेमा गोप्य तवरबाट बुझ्नुप¥यो भने मान्छे पठाउँछ तर उद्देश्य र कार्यक्रम भन्दैन । क्लान्डेस्टाइन एक्टिभिटिज र ट्राक टु प्रयास बारम्बार हुन्छन् । वर्तमान परिप्रेक्षमा यो पक्कै उनीहरूको आँखो देखा जायजाका लागि, स्ट्रेट फ्रम द हर्सेज माउथ कुरा बटुल्न गरिएको प्रयास हो । हामीले आफ्नो धर्म छोड्नुहुन्न ।”
सम्पर्क सूत्रले उताबाट फेरि खबर पठायो, “उनीहरू स्थलमार्गबाट काठमाडौं पुग्ने भन्दैछन् । त्यै होलाजस्तो लाग्छ ।”
बाबुराम भट्टराई भन्न थाले, “इण्डियाको राजनीतिमा पदयात्रालाई ठूलो महत्व दिइन्छ । स्थलमार्गबाटै आउने भनेको यमुना र वाग्मतीको दूरीमा भएका धरातलीय वास्तविकतालाई पनि सुक्ष्म ढङ्गले नै हेर्न खोजिएको हो भन्ने हामीलाई लागिराख्या छ ।”
तब प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल र होटेलसम्मको विशेष सरसफाई हाललाई स्थगित गर्न अर्को निर्देशन दिए ।
कांग्रेसका नेताहरू कराउन थाले, “एयरपोर्ट र बाटोको सरसफाई स्थगित किन ? सरसफाई जस्तो अनिवार्य आवश्यकता पनि विदेशीलाई देखाउन मात्र हो, हाम्रो आवश्यकता होइन भन्ने सरकारको मान्यता हो ?”
प्रधानमन्त्री भन्छन्, “सीमित साधन स्रोतको अनावश्यक ठाउँमा अपब्यय गर्ने, यो सरकारलाई बेवकुफहरूको झुण्ड ठान्नुभा’छ ? महालेखाको रिपोर्टमा डरलाग्दो बेरुजु पनि पढ्नु भएको छैन भने कस्तो प्रतिपक्षी हो तपाईहरू ?”
सूत्रले पछिल्लो सूचना दियो, “उनीहरू पैदलयात्रा गर्दै सीमा नाकाबाट नेपाल पस्ने भन्दैछन् । आईपुग्ने बेलामा खबर गर्लान्…..।”
त्यसपछि सीमानाका भएका सबै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीदेखि सीडीओसम्मलाई प्रधानमन्त्रीले स्वागत तयारीको कडा निर्देशन दिन टेलिफोन गर्न थालियो । प्रधानमन्त्रीको जंगबहादुर शैलीमा हुकुम गयो ।
दिनहरू बित्दै गए । यमुनापारीबाट हिँडेकाहरू एकदिन रुपैडिहा नाकाबाट नेपालगञ्ज छिर्ने सूचना त्यही सुत्रले दियो । राज्यका मै हूँ भन्नेहरू हाम्फाल्दै उडेर होस् वा गुडेर, नेपालगञ्ज पुगे । नेपालगञ्ज स्वागत तयारीका लागि सिँगारिएर झकिझकाउ छ ।
ठूलाबडाहरू तँछाडमछाड गर्दै यमुनापारीका प्राणीको स्वागतार्थ निर्धारित स्थानमा पंक्तिबद्ध भए । नेपालगञ्जमा मात्र किन, नेपालभरि नै रमितेको भीड लाग्न कुनै ठूलो घटना नै चाहिँदैन । त्यहाँ पनि रमितेहरू सित्थैमा थुप्रिए ।
आउन त आए ‘कृष्णवर्णहरू’ ! तर सबै काला कुकुरहरू रहेछन् ! घरमा तालिम दिएर स्याहारका साथ पालिएका कुकुर पनि होइन, सडकमा छोडिएका, बेवारिश, उपेक्षित र तिरस्कृत, भुस्याहा !
भएछ के भने भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘स्वच्छ भारत’ अभियानले सरसफाईलाई ज्यादै जोड दिएपछि शहर सफा हुनथाल्यो । फ्याँकिएको खानेकुरा पाउन छोडियो । भुस्याहा कुकुरहरूलाई बाँच्ने संकट आइलागेपछि सल्लाह गरेछन्, संसारको सबभन्दा फोहोर राजधानी शहर काठमाडौं हो रे ! जहाँ फोहोर, त्यहीँ हाम्रो जीवन, चलो भाई काठमाडौँ ! चैत १९ गते नेपालका नेतालाई अप्रिल फूल बनाउँदै कुनै उट्पट्याङ्ले दिल्लीको भरपर्दो सूत्र बनेर यो सब रमिता गराईदियो ।
यही अर्थमा नेपालमा उखानै छ, “यमुनापारीको कुत्ता पनि वाग्मती किनारको पाहुना !”
(पात्र र प्रवृत्ति यथार्थ भएपनि घटना, सन्दर्भ र संवाद काल्पनिक हो ।)